उत्तर कोरियाले गर्‍यो नाकाबन्दीको कडा विरोध, आणविक परीक्षण झनै बढाउने
HOME » उत्तर कोरियाले गर्‍यो नाकाबन्दीको कडा विरोध, आणविक परीक्षण झनै बढाउने
रासस , २८ भाद्र २०७४
प्योङयाङ। संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियाका विरुद्धमा थप तथा कडा नाकाबन्दी लगाएपछि उत्तर कोरियाले त्यसको कडा विरोध गरेको छ।
सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियाका विरुद्धमा नाकाबन्दीको कानुन पारित गरेको थियो। उत्तर कोरियालाई उसको अर्थतन्त्रमा असर पार्नेगरी भन्दै मङ्गलबार लगाइएको सो नाकाबन्दीको विरोधमा उसले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो।
अमेरिकाको प्रस्तावमा उत्तर कोरियाका विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले लगाएको नाकाबन्दीलाई उसले दुष्ट कामको संज्ञा दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा सोमबार सर्वसम्मत निर्णय भएपछि उसले भनेको थियो– यसका विरुद्धमा अमेरिकाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।
सोमबार चीन र रुसको पनि सहमति र उक्त परिषद् वैठकको सर्वसम्मतिमा सो कानुन पारित गरिएको हो। उत्तर कोरियाले बारम्बार यस्ता क्षेप्यास्त्र परीक्षणगर्दै आएकाले उसका विरुद्धमा यो कानुन ल्याइएको अमेरिकाले जनाएको छ।
उत्तरले गत हप्तामात्र एक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम नै परीक्षण गरेको थियो। त्यसका विरुद्धमा यो पछिल्लो नाकाबन्दी आएको हो। यस कार्यलाई उत्तर कोरियाले निन्दा गर्दै आणविक परीक्षणको कार्य नरोकिने बरु थप बढाउदै लाने जनाएको हो।
विश्व समुदाय एवम् संयुक्त राष्ट्रसंघले व्यापक मात्रामा विरोध गर्दागर्दै पनि उत्तर कोरियाले आणविक क्षेप्यास्त्र हान्ने गरेको छ। उसले सन् २००६ देखि नै निरन्तररुपमा यस्तो परीक्षण गर्दै आएको छ। एएफपी
HTML Tags are not supported
Post My Comment »
एक घण्टामै ५० हजार भ्यु पुगेको काटुन्ज क्रु को नयाँ भिडियो ‘कहिले होला’ ? (भिडियो)
ट्राफिक प्रहरीकै कारण सडकमा देखिएको अशोभनीय दृश्य
काठमाडौंका छ स्थानमा निषेधाज्ञा जारी, बिरोधका कार्यक्रम गर्न नपाईने
मनोज पुन इन्काउण्टरः शरीरबाट प्रहरीले निकाल्यो २२ वटा गोली
छक्का पञ्जाका लागि बनेको गीत रूपै मोहनीमा 'हाइज्याक'
निर्देशकले पोर्नस्टार ल्याएर ‘सेक्स’का विषयमा फिल्म बनाएपछि... (भिडियोसहित)
यी हुन् बंगलादेशकी सनी लियोनी, हेर्नुहोस् उनको हट अवतार (फोटोफिचर)
बिहानै गुण्डा नाइके मनोज पुन प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए
जापानमा आइफोनको रुखै भेटिन साथी ! (भिडियो)
खानेपानीमा रगत र लेदो भेटिएपछी...
मधेश केन्द्रित दललाई सरकारमा ल्याउन पहल जारी
वाम एकताले अन्तर्राष्ट्रिय बहस सिर्जना गरेको छः अध्यक्ष दाहाल
'माओवादी थापाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने'
नेपाली क्रिकेट टिमलाई तीन लाख नगदसहित सरकारको सम्मान (फोटोफिचर)
पहिरोमा पुरिएका आठ शव निकालियो
प्रेममा धोका खाँदा पनि हुनसक्छ मृत्यु, जान्नुहोस् चकित पार्ने ६ मनोवैज्ञानिक तथ्य
'हुर्रे'को प्रमोशनका लागि रेसिङ बाइकमा केकीको पोज
राष्ट्रिय सभामा तीन सांसद मनोनित गर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा
प्रधानमन्त्री ओलीका पिता बालुवाटारमा अलपत्र ! (भिडियो)
दाजुले गरे बहिनीको हत्या
डिसी नेपाल डटकम एक दशकदेखि निरन्तर संचालनमा रहेको नेपाली भाषाको समाचार अनलाइन हो। हामी समाचार, सूचना, विचार, मनोरञ्जन र पाठकको रूचिका विविध सामग्री समेट्छौं। © 2017 www.dcnepal.com